Hery Rajaonarimampianina : Nahita mpiara-miombon’antoka maro tany Sina -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Nahita mpiara-miombon’antoka maro tany Sina
Mihamafy ny fifandraisana eo amin’i Madagasikara sy Sina. Anisan’ny goavana amin’ny fitsidihan’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, miaraka amin’ireo mpikambana maromaro eo anivon’ny governemanta ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta eo amin’ny lafin’ny politika, toekarena ary ny diplomasia.
Ankoatra izay, araka ny efa fantatra dia nasain’ny fitondram-panjakana Sinoa manokana ny fitondram-panjakana malagasy amin’ny fiatrehana ny Fihaonamben’i Boao (Sina) ho an’i Azia.
Tsy nionona fotsiny tamin’ny fiatrehana io Fihaonamben’i Boao io ny Fitondram-panjakana fa nijery ireo orinasa sinoa afaka miara-miasa amin’i Madagasikara. Tamin’izany indrindra, nody ventiny ny rano natsakaina. Nahita mpiara-miombon’antoka ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, sy ireo minisitra niaraka taminy.
Omaly ihany, nitsidika ilay Vondrona orinasa govana China Communications Contsruction Company na CCCC sy ny Vondrona Huawei ny delegasionim-panjakana malagasy. Araka izany, tontosa tamin’io fotoana io avy hatrany ny fifanarahana amin’ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miombon’antoka teo amin’ny Fitondram-panjakana sy ireo Vondrona orinasa ireo.
Ankoatra izay, nanatanteraka fifanarahana tamin’ny rantsa-mangaikan’ny CCCC antsoina hoe China Roads and Bridges Company na CRBC ny fanjakana malagasy amin’ny fananganana sy fanamboarana seranan-tsambo amin’ny rano lalina amin’ny “Baie de Narindra” iny, any amin’ny Faritanin’i Mahajanga. Efa tetikasa efa ela io saingy tsy tanteraka mihitsy hatramin’izay. Hisy ihany ny koa ny tetikasa goavana amin’ny fanamboaran-dalana, izay mampitohy ny “Baie de Narindra” amin’ny Lalam-pirenena fahefatra (RN4).
Mikasika ny Vondrona Huawei indray, miara-miasa amin’ny governemanta malagasy izy ireo amin’ny fananganana ny “Smartville”. Izany hoe, io “Smartville” io no mitantana ny tanàna amin’ny alalan’ny elektrônika. Mikasika ny fifanarahana nataon’ny fanjakana malagasy tamin’ny Vondrona Huawei, hisy ny tetikasa manokana momba ny tanànan’Antananarivo.
Araka izany, nody ventiny ny rano natsakaina ho an’ny Fitondram-panjakana malagasy tany Sina. Maro ny tombontsoa azon’i Madagasikara tamin’ny fivahinianan’ny Filoham-pirenena sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ary ireo mpandraharaha ara-toekarena.